Global Voices teny Malagasy » Amin’ny Volavolan-dalàna Mifehy Ny Heloka Antserasera Ao Brezila, Lasa Miasa Ho ‘Andrimasom-Pokonolona’ Ny Media Sosialy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Avrily 2016 5:10 GMT 1	 · Mpanoratra Taisa Sganzerla Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, GV Mpisolovava
Pikantsary mampiseho ny fanisam-bato ahitana ireo mpikatroka mihoby ny volavolan-dalàna tao amin'ny antenimieran-doholona. Marsa 2014. Sary nozarain'i Carolina Rossini tao amin'ny Twitter.
Mieritreritra andiana lalàna vaovao mety hanimba indrindra ny fahalalahana miteny amin'ny aterineto ao amin'ny firenena ny Kongresin'i Brezila. Niteraka tsikera marobe avy amin'ny mpiaro ny zo nomerika ny volavolam-panitsiana, vokatry ny tatitra farany avy amin'ny Komitin'ny Fanadihadiana Parlemantera misahana ny Heloka Antserasera (CPI dos Crimes Cibernéticos), .
Nisarika ny sain'ny iraisampirenena teo amin'ny sehatry ny zo nomerika i Brezila taorian'ny fankatoavana ny Marco Civil , ‘ fanambaràn'ny zon'olombelona’ ho an'ny aterineto izay miaro mazava tsara ny zo haneho hevitra malalaka amin'ny aterineto sy miantoka ny tsy fitongilanan'ny tambajotra sy ny fiarovana lahatahiry. Novolavolain'ireo manampahaizana momba ny lalànan'ny teknolojia tamin'ny alalan'ny dingana fakan-kevitra misokatra miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena ny volavolan-dalàna, fomba fanao vaovao ao Brezila sy maneran-tany. Na dia lany tamin'ny taona 2014 aza, izay hitan'ny maro fa anisan'ny valinteny ara-politika tamin'ny ampamoakan'i Snowden, niaritra fikasana fanovana betsaka izany nanomboka teo. Ity no lehibe indrindra hatramin'izao.
Manome tolo-kevi-panitsiana ny Marco Civil ny tatitra  izay mitaky ny tranonkala sy ny tambajotra sosialy mba hanaisotra votoaty manala-baraka – izany hoe votoaty hita fa “manimba ny voninahitry ny tena manokana” – ao anatin'ny 48 ora nandraisana ny fampahafantarana avy amin'ny mpitory na ny olona niharan'ny votoaty voalaza. Mety hiatrika heloka tsotra na heloka bevava amin'ny tranga sasany koa ny tranonkala raha tsy mahavita mandray andraikitra mamaly ny fangatahana. Milaza ihany koa ny fanitsiana fa tsy maintsy manaramaso ny zavatra ataon'ny mpiserasera ny tranonkala sy ny tambajotra sosialy mba hisorohana ny votoaty tahaka izany tsy hipoitra indray manerana ny aterineto, maro loatra saingy asa sarotra tanterahana.
Amin'izao fotoana izao, ireo tranonkala tsy mahavita manaisotra sary na horonan-tsary manokana tsy nifanaharana ihany no sazian'ny Marco Civil. Amin'ny tranga hafa rehetra, tsy maintsy mampiseho didim-pitsarana amin'ny orinasa ny mpitory vao azo fafana amin'ny tranonkalany ny votoaty.
Manamarika fisintahana amin'ireo lalàna maro momba ny fanalam-baraka ao Amerika Atsimo  ihany koa ity fanitsiana manokana ity, ka manolotra fiarovana mitovy tantana ho an'ny olo-tsotra sy ny olo-panjakana ihany manoloana ny fanalam-baraka. Nilaza ny fanambarana niarahana natao nosoniavin'ireo fikambanana Breziliana sy iraisampirenena 50 mpiaro ny zo nomerika fa hiteraka “fiantraikany masiatsiaka” amin'ny fahalalahana maneho hevitra ny fanovana tahaka izany:
Manjavozavo ity tolo-kevitra ity ary mety ahafahan'ny olona, sy izay mety ho lasibatra, ary ny mpisolovavan'izy ireo hitaky mivantana ny fanaisorana votoaty any amin'ilay sehatra.
Hoy ny voalazan'ny fanangonan-tsonia navoakan'ny Ivontoerana ho an'ny Teknolojia sy ny Fiarahamonina Rio , vondrona mpiaro ny zo nomerika, izay efa nahangona sonia maherin'ny 10.000 hatramin'izao:
Raha misy olona manala baraka mpanao politika ao amin'ny sehatra media sosialy, voatery hanaisotra ny votoaty ao anatin'ny 48 ora farafahabetsany ilay sehatra. Raha tsy izany, miara-tompon'andraikitra amin'izany votoaty izany ihany koa ilay orinasa ary tsy maintsy manonitra amin'ilay mpanao politika nalaina baraka. Amin'ny teny hafa, lasa mpiasa maharitra amin'ny fanaraha-maso sy mpanivana ho an'ny mpiseraserany ny orinasan'ny media sosialy.
Mety ahafahan'ny fitsarana hitaky amin'ireo mpamatsy tolotra aterineto mba hanakana ny fidirana amin'ny fampiharana voarohirohy amin'ny famotorana momba ny heloka bevava ny fanitsiana iray hafa.
Mpikaroka Sergio Amadeu Oliveira nilaza hoe :
Ity fomba iray ity ohatra dia mety ahafahan'ny mpitsara mandràra ny fidirana amin'ny tambajotra P2P na manohintohina ny fidirana amin'ny teknolojia vaovao ary mampihatra ny fanamaizinan-tsaina nomerika tsy azo ekena ho an'ny firenena te-handroso ao anatin'izao vanim-potoanan'ny fampahalalam-baovao izao.
Mitaky amin'ireo mpamatsy tolotra aterineto sy mpamatsy fampiharana mba hilaza ny adiresy IP-n'ny mpiserasera any amin'ny sampan-draharahan'ny fampiharan-dalàna tsy misy didim-pitsarana ny tolo-kevi-panovana ny Marco Civil hafa koa . Ny lalàna Breziliana amin'izao fotoana izao dia mamela ny sampan-draharahan'ny fampiharan-dalàna hamatantra tsy mila didim-pitsarana ny adiresy manokan'ny mpiserasera sy ny anaran'ny ray aman-dreniny . Ny fanovana natolotra dia mampiditra adiresy IP amin'izany lahatahiry izany. Mazava tsara ny Marco Civil fa tokony omena miaraka amin'ny didim-pitsarana ny adiresy IP.
Manome soso-kevitra hanitarana ny foto-kevitra momba ny heloka bevavan'ny “fidirana an-tsokosoko”, na fidirana tsy nahazoana alalana amin'ny fitaovana elekitironika ihany koa ny tolo-kevitra ka sokajiana ho heloka bevava izay fidirana an-tsokosoko na inona na inona antony. Ny lalàna Breziliana amin'izao fotoana izao kosa dia milaza fa heloka bevava izany raha toa ka voaporofo fa ny hanimba lahatahiry tsy misy alalana avy any amin'ny tompon'ny fitaovana no fikasana.
Ary soso-kevitra iray hafa kosa milaza fa izay heloka rehetra atao amin'ny aterineto dia azon'ny Polisy Federaly ao Brezila atao fanadihadiana, fa tsy ny polisin'ny faritra misy ny toerana onenan'ny lasibatra. Amin'ny lalàna ankehitriny, ny heloka bevava ao amin'ny aterineto mikasika ny sary vetaveta misy ankizy na fanavakavahana ara-poko ihany no eo ambanin'ny fahefan'ny polisy federaly.
Nilaza ny mpanoratra ny tatitra, filoha lefitra federaly, Espiridião Amin avy ao amin'ny Antoko Mandroso Mpandala ny Nentin-drazana fa “ilaina ny mahita vahaolana mampifandanja ny fahafahana, ny fanavaozana, ny orinasa malalaka ary ny fiarovana. Tsy azo ekena ny andian-jiolahy mampiasa ireo fampiharana ireo mba hanao heloka bevava ary tsy mahazo miditra amin'ireo rafitra ireo ny manam-pahefana. “
Alefa any amin'ny latsa-bato farany amin'ny fivoriam-baomiera amin'ny 12 Aprily ny tatitra. Raha lany, hiadian-kevitra indray ao amin'ny antenimieram-pirenena ao Brezila ny volavolan-dalàna.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/04/19/81337/
 Marco Civil: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
 lalàna maro momba ny fanalam-baraka ao Amerika Atsimo: https://cpj.org/reports/2016/03/south-america.php
 fanambarana niarahana natao : https://www.accessnow.org/joint-statement-brazil-cybercrime/
 Ivontoerana ho an'ny Teknolojia sy ny Fiarahamonina Rio: https://www.change.org/p/congresso-nacional-diga-n%C3%A3o-%C3%A0-censura-da-internet-n%C3%B3s-defendemos-a-liberdade-na-internet
 nilaza hoe: http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/mobile/2016/04/07/cpi-dos-crimes-ciberneticos-poe-pais-a-reboque-do-autoritarismo.htm